အဲဒီတုန်းကသူမရယ် ကျနော်ရယ် နောက်ပြီး နှလုံးသားအသစ်ကိုယ်စီရယ်ပေါ့
အဲဒီစာကိုရေးပြီး ပေးသင့်မပေးသင့်ကျနော့်စိတ်တွေက ချီတုံချတုံ… ဘာဆက်ရေးရမှန်းလည်းမသိ..
ကျနော့ရဲ့ဖြစ်အင်ကိုကြည့်ပြီးစိတ်မရှည်နိုင်တော့တဲ့သူငယ်ချင်းက..“ပေးစမ်းကွာ မင်းစာ…ဒီလောက်တောင်ဖြစ်နေတဲ့ဟာ.. ငါအခုချက်ခြင်းသွားပေးမယ်”
….ငယ်ကပေါင်းအနှစ်တသောင်း မမေ့ကောင်း.. တဲ့
အဲဒီစကားသာမှန်ခဲ့ရင် သူမဟာ ကျနော့ရင်ထဲမှာ ခုထိရှိနေပါဦးမယ်
“မင်းတို့အဒေါ်ဆီမှာ မနေ့ကမှစက်ချုပ်လာသင်တဲ့ကောင်မလေးက ရေရေလည်လည်မိုက်တယ်ကွာ.. မင်းမတွေ့သေးဘူးဟုတ်.? အသားလေးကဥနေတာပဲ... ဟဲဟဲ..ညနေကျရင်မင်းတို့အဒေါ်ဆီသွားလည်ရအောင်ကွာ...မင်းမျက်နှာနဲ့လေ.. ငါ့ကိုပြောပေးနော်... ဟီးဟီး”
“အ လိုက်ပါဘိသူငယ်ချင်းရယ်...ငါကဗြမ္မာပြည်ကလာတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာ ကိလေသာကုန်ခမ်းနေတဲ့ အရိယာသူတော်စင်မှမဟုတ်ဘဲ.... လှတာမြင်ရင်ငါလည်းချစ်ချင်တာပဲပေါ့ ညနေကျရင်ငါသွားကြည့်လိုက်မယ် ငါ့မျက်လုံးထဲမှာလှတယ်ထင်ရင်တော့ မင်းအသဲကွဲဖို့သာပြင်”
ညနေကျတော့အဒေါ့်အိမ်ကိုကျနော်ရောက်သွားတယ် love at first sightဆိုတဲ့စကားဟာဒီနေရာမှာမှန်ကြောင်းကျနော်သိလိုက်တယ်။ ကောင်မလေးသိပ်လှနိုင်လွန်းတယ် မြင်မြင်ချင်းပဲ စွဲသွားတယ်
အဲဒီနေ့ကစပြီးအဒေါ်အိမ်ကိုအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြီး ကျနော်နေ့တိုင်းသွားနေတော့တယ် တဖြေးဖြေးနဲ့လူပြောစရာဖြစ်လာပေမယ့် ကျနော် .. ရှက်လဲမရှက်နိုင်တော့ပါဘူး ယောင်္ကျားတို့ဖွံသေခါမှလျှော့၏ထုံးနှလုံးမူထားတယ်လေ..။
“ပါးစပ်ကနေချစ်နေရုံနဲ့မပြီးဘူးကွ... ကောင်မလေးကို ချိန်းတွေ့ ဖက်နမ်းပစ်”
နောက်တစ်ရက်မိုးလင်းတော့ကျနော်စာတစ်စောင်ရေးပြီးပေးလိုက်တယ် “ညကတစ်ညလုံးမိုးလင်းပေါက်ထိုင်စောင့်ခဲ့ကြောင်း ခြင်တွေကလည်းကိုက်ကြောင်း မှောင်ကလည်းမှောင်၊ချမ်းကလည်းချမ်း၊ ခွေးကလည်းအူ(ဆိုင်သလားမသိ)နဲ့တစ်ယောက်တည်း အသည်းငယ်ရကြောင်း ၊ နောက်ဆုံးဆင်းမလာတော့ဘူးဆိုတာသေချာတော့မှဝမ်းနည်းပက်လက်လှည့်ပြန်ခဲ့ရကြောင်း လမ်းတွင်မှောင်နေသဖြင့်ခလုတ်လည်းတိုက်သေးကြောင်း” အကုန်လျှောက်ရေးတယ်။ အဲဒါနဲ့ကောင်မလေးကျနော့ကိုသနားသွားတယ် နောက်ညထပ်ချိန်းတော့ အိမ်သားတွေအအိပ်မှာကောင်မလေးတိတ်တဆိတ်ဆင်းလာခဲ့တယ်.....
ခြင်မကိုက်တဲ့ည မမှောင်တဲ့ည မချမ်းတဲ့ည ခွေးတွေမအူတဲ့ည ခလုတ်လည်းမတိုက်တဲ့ညပေါ့ ။
ကိုးကွယ်တဲ့ဆရာတော်ရဲ့ကျောင်းကထိန်အလှူတစ်ခုမှာကျနော်သွားဝိုင်းလုပ်တုန်းကပေါ့ အလှူဒါယကာတွေနဲ့ပါလာတဲ့ကောင်မလေးကိုကျနော်သတိထားမိတယ် အသားညိုညိုလေးနဲ့ ရယ်ရင်သွားတက်ကလေးနဲ့ စကားပြောရင်အသံစာစာလေးနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ် ဝိုင်းလုပ်စရာတွေပြီးတော့ကျနော်တို့လူငယ်တွေကျောင်းဝင်းအပြင်မှာထိုင်ပြီးစကားပြောကြတယ် … ကောင်မလေးလည်းပါတယ် ညနည်နည်းနက်လာတော့အားလုံးပင်ပန်းပြီးပြန်အိပ်သွားပြီ အစောကြီးလည်းထရဦးမှာကို
ကောင်မလေးရယ် ကျနော်ရယ်ပဲကျန်ခဲ့တယ် ကျနော်လည်းဒီနေ့ပင်ပန်းလို့အိပ်ချင်နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောတော့ ကောင်မလေးက “နေပါဦးအစ်ကိုရယ်တဲ့ အစ်ကိုနဲ့စကားပြောနေရရင်ပျော်တယ် အိပ်ပါနဲ့ဦး”တဲ့ အဲဒါနဲ့ဆက်နေလိုက်ရတယ်
၁နာရီလောက်ကျတော့လူကမနိုင်တော့ဘူး အရမ်းအိပ်ချင်လာတယ် ပြန်အိပ်တော့မယ်ကွာဆိုတော့ကောင်မလေးကနေပါဦးလားပဲ အဲဒါနဲ့ကျနော်လည်းစိတ်အချဉ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ဒီလောက်တောင်ဖြစ်လှတာဆိုပြီးရည်းစားစကားပြောပစ်ပလိုက်တယ် ကျနော်စိတ်ကူးထားတာကတမျိုးပါ ကျနော်ရည်းစားစကားပြောရင်ကောင်မလေးစိတ်ဆိုးပြီးထွက်သွားမယ်ပေါ့ ဒါပေမယ့်ကျနော်မှားပါတယ် ကောင်မလေးကစိတ်မဆိုးတဲ့အပြင် ကျနော့်ကိုလည်းမြင်မြင်ချင်းချစ်နေပါတဲ့အကြောင်း တန်းပြောတယ်…
အဲ…အဲ…. ကျနော်လည်းအိပ်မှုံစုန်မွှားနဲ့ ကောင်မလေးကိုနမ်းလိုက်မိလား...?ဘာလုပ်လိုက်မိလဲ..?မမှတ်မိတော့ဘူး....
ရယ်စရာတော့ကောင်းတယ် အဲဒီညပြီးတော့နောက်တစ်ရက်လင်းတော့အလှူကိစ္စဝိုင်းလုပ်ပြီးကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ပြန်ကြတယ် အဲဒီကတည်းကစပြီးကောင်မလေးကိုထပ်မတွေ့ရတော့ဘူး ရှာဖို့လည်းကျနော်မကြိုးစားမိဘူး
ဒီတခါကျနော်လူကြမ်းမင်းသားလုပ်တဲ့အလှည့်ပါ ကျနော့်ရဲ့“မမိုး”က ကျနော့ထက်၂နှစ်ကြီးပါတယ်
“ကျနော့ကိုအသာတစ်ကြည်ပြန်ချစ်ပါ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ မ တို့တစ်ရွာလုံးကိုမီးရှို့ပစ်ရပါလိမ့်မယ်”ဆိုတဲ့ ဓါးပြဗိုလ်ကြီးရဲ့အသံမျိုးနဲ့ပါ
အဲဒါကြောင့်ပဲ မ ကျနော့်ကိုချစ်တယ်လို့မပြောခဲ့ပါ ကျနော့်ရဲ့ ဂျစ်ကန်ကန် ပေစောင်းစောင်းစရိုက်တွေဟာ မ နဲ့မအပ်စပ်ခဲ့ဘူးလေ။ ကျနော့်ရဲ့ ပြောချင်တာဇွတ်ပြောပြီး လိုချင်တာဇွတ်ယူတတ်တဲ့ဥာည်ကြောင့်တခါတခါ မ ကိုသနားနေမိတယ်.......
ဒါပေမယ့် မ ကျနော့်ကိုချစ်နေပါတယ်ဆိုတာ သူ့ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းကပြောပြတော့မှကျနော်သိခဲ့ရတယ်...
ဒါပေမယ့်… ဒါပေမယ့်ပေါ့လေ… အားလုံးပြီးသွားခဲ့ပြီလေ..။
ထားဖူးသမျှရည်းစားထဲမှာအရှက်အကြောက်အကြီးဆုံး ဣနြေ္ဒအရှိဆုံး မိန်းကလေးပါ တခါတခါသူမရဲ့တည်ကြည်လွန်းတဲ့အနေအထိုင်ကြောင့် ချစ်ရတဲ့ကျနော့်မှာအောင့်သက်သက်..
ဖက်နမ်းမိရင်ငရဲပဲကြီးတော့မလိုလို...။ ဘုရားရှိခိုးရင်လည်းအရမ်းကြာတယ် ရှိသမျှဘုရားစာအကုန်ရွတ်ပြီး ရှိသမျှဆုကိုအကုန်တောင်းလားမသိ အပေါင်းအသင်းတွေကြားမှာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ လူကြီးလေးလိုဖြစ်နေတယ် “တောင်းတဲ့ဆုတွေထဲမှာ ကိုယ်နဲ့သေတပန်သက်တဆုံးပေါင်းရပါစေဆိုတဲ့ဆုမပါဘူးလား”လို့မေးကြည့်တော့ “ဟိဟိ အဲဒါတော့ဆုမတောင်းမိဘူး ဘုရားကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်”တဲ့
ကျနော်လေ… ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ် ဒါနောက်ဆုံးအချစ်ပဲလို့လည်းထင်ခဲ့တယ်
အများကြီးလည်းမျှော်လင့်ခဲ့တယ်.... ဒါပေမယ့်…. ဒါပေမယ့်ပေါ့ဗျာ..... ကံကြမ္မာကိုကြိုမမြင်ခဲ့ဘူးလေ....။ ။
(နာမည်တူနေရင်ခွင့်လွတ်စေချင်တယ် အားလုံးနာမည်အမှန်တွေပဲဖြစ်တယ် သူတို့ပြန်ဖတ်မိမှာကိုကျနော်မစိုးရိမ်ပါ.... ပြီးခဲ့တာတွေလဲပြီးခဲ့ပြီလေ..)
broကြီး ree noe mannရေ..ကျေနပ်နိုင်ပါစေ... :)
in hand အကြောင်းသိချင်လို့
ဘာလဲဗျ in hand???
လက်ရှိ အကြောင်းကိုပြောတာ။ ခုလက်ထဲမှာ ဘယ်သူရှိလဲ။
များလိုက်တာဗျာ....အားကျပါရဲ့ ...သို့ သော် မလွယ်
အသစ်ထပ်တွေ့ ရင် ပြောပြအုံး
အလှူအိမ်က ကောင်မလေး ကို လိပ်စာလေး ဖုန်းနံပတ်လေးတောင် မတောင်းထားဘူးလား..ဒါတော့ လွန်တာပေါ့
ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်။ ကျွန်မလည်း လင့်ခ်ထားမယ်နော်...ထိုင်ရေးရေး ထ ရေးရေး ဘာပဲရေးရေး သိရအောင်လို့ ...
ဖတ်လို့ကောင်းပါ၏.. တို့လဲလင့်ပြီနော်... သူများတွေလို in hand ကရောဘယ်သူလဲဆိုတာ သိချင်ပါ၏
ရေးမဲ့ရေးတော့လဲ ကို့ဆရာ မနည်းဘူးပဲ ကောင်းတယ်၊
သယ်ရင်း တော်တော် စွံတာဘဲကွာ မင်း လို အတုခိုးပြီးရေးရင်ကောင်းမလား မသိဘူး ငါလည်း ရေးရဦးမယ်
ဗျိုးးးးးး မွေးစားဖေဖေ ရေ စွံလှချဉ်လား ဝေးးးးး မီးကျတော့ အဲလိုလဲ ရှာပေးဘူး အဟင့် နိုချင်တယ် ဗြဲဟဲဟဲ
နာ့အကို စွံမှန်း ခုမှသိတယ်။
သူများတွေလို in hand ကရောဘယ်သူလဲဆိုတာ သိချင်ပါ၏